နားထောင်လိုက်တာနဲ့ သင်္ကြန်အငွေ့အသက်တွေလွှမ်းခြုံသွားစေမယ့် တေးသီချင်းများ - For her Myanmar
သင်္ကြန်ပိုးတွေ မရိုးမရွဖြစ်သွားအောင် နှိုးဆွပေးလိုက်ပါပြီရှန်
ယောင်းတို့အတွက် Stella ရဲ့ playlist လေးအလှည့်ရောက်လာပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ နိုင်ငံခြားသီချင်းတွေအစား သင်္ကြန်လည်းကျတော့မယ်ဆိုတော့ သင်္ကြန်သီချင်း collection လေးလုပ်ပြီး သင်္ကြန်ပိုးလေးသွင်းပေးလိုက်ဦးမယ်။ Stella တို့ငယ်ငယ်တည်းက အခုချိန်ထိ သင်္ကြန်တိုင်း မပါမဖြစ်တဲ့သီချင်းတွေချည်းပဲဆိုတော့ Stella နဲ့တူတူသင်္ကြန်သီချင်းတွေကို နားထောင်ကြည့်ရအောင် …
တေးသံရှင်ဇော်ပိုင်ပြန်လည်သီဆိုထ “သင်္ကြန်မိုး” သီချင်းက အခုထိလူတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာ စွဲနေဆဲပါ။ “မိုးပြေးလေးရေ သင်္ကြန်မိုးလေးရေ စိုရုံဖြန်းပက်ဦး” ဆိုတဲ့စာသားတွေက သင်္ကြန်နားနီးပြီဆိုတာနဲ့ ယောင်းတို့ခေါင်းထဲရောက်နေပြီ ဟုတ် ?
ဒီသီချင်းစထွက်တုန်းကဆို (၁၀) နှစ်သမီးပဲရှိသေးတယ်။ အဲ့အချိန်တည်းက နားယဉ်နေခဲ့တဲ့သီချင်းက ခုထိလူကြိုက်များတုန်း။
Related article >>> သင်္ကြန်တွင်းလည်မယ့် ယောင်းတို့ မဖြစ်မနေဆောင်သွားသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (၅) မျိုး
ဒီသီချင်းနဲ့ပဲ သင်္ကြန်မှာ ဆိုကြကကြနဲ့ သိပ်ကျက်သရေရှိတာပေါ့။ “မြနန္ဒာ ရေညိုညိုရစ်ခတ်သန်းတော့ ရွှေမန်းတောင်ရိပ် တူတူခိုမယ်ပျိုဖြူတွေရယ်” ဆိုတဲ့သီချင်းက မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ကို အထင်ဟပ်ဆုံးဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။
“ပိတောက်လက်ဆောင်”ကို ကြားမိတိုင်း ပိတောက်ပန်းဝါဝါထိန်ထိန်တွေကို ပြေးမြင်တာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလားကွ။
Related article >>> သင်္ကြန်တွင်း အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ
“တစ်နှစ်တစ်ခေါက်တော့ရောက်လာမယ် မိန်းမချောလေးရေ” ဆိုတာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးသင်္ကြန်အငွေ့အသက်တွေနဲ့ နွေးရပါတယ်။
“သင်္ကြန်နွေဦးတူးပို့တူးပို့” ဆိုတာနဲ့ နောက်ကနေလိုက်ဆိုနေမိပြီဆိုတာ ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်။
Related article >>> နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်မှာ အပီပျော်နိုင်ဖို့ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အချက်များ
နှစ်တွေပြောင်းလည်း မဟောင်းတဲ့သီချင်းဆိုရင် ဒီသီချင်းကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးပြရမယ်ထင်တယ်။ လိပ်စာပျောက်တဲ့ရှာပုံတော်မင်းသားကြီးကိုလည်း သနားရတာအမော …
“ဟေ့ ဟေ့ နွေမ နွေမရဲ့ကပုံလေးက ချစ်စရာကွယ်” ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ထဲက အကြောပေါင်းတစ်ထောင်လောက်က ငြိမ်ငြိမ်မနေတော့ဘူးဆိုရင် သေချာပါပြီ ယောင်းက သင်္ကြန်ပိုးတစ်ယောက်ပါပဲ။
ဒီသီချင်းတွေက သင်္ကြန်ရဲ့သင်္ကေတတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီသီချင်းတွေကြားလိုက်တာနဲ့ ဪ သင်္ကြန်တောင်နီးပြီပဲလို့ အမှတ်ရတယ်။ သင်္ကြန်ပိုးရှိတဲ့သူများဆိုရင်ဖြင့် ဘယ်အသက်အရွယ်ရောက်ရောက် ဒီသီချင်းတွေကြားတာနဲ့ မရိုးမရွတွေကို ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ။ ကဲ … For Her Myanmar ရဲ့ ယောင်းတွေထဲမှာကော သင်္ကြန်ပိုးဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲ ?
သွင်ျကနျပိုးတှေ မရိုးမရှဖွဈသှားအောငျ နှိုးဆှပေးလိုကျပါပွီရှနျ
ယောငျးတို့အတှကျ Stella ရဲ့ playlist လေးအလှညျ့ရောကျလာပါပွီ။ ဒီတဈခါတော့ နိုငျငံခွားသီခငျြးတှအေစား သွင်ျကနျလညျးကတြော့မယျဆိုတော့ သွင်ျကနျသီခငျြး collection လေးလုပျပွီး သွင်ျကနျပိုးလေးသှငျးပေးလိုကျဦးမယျ။ Stella တို့ငယျငယျတညျးက အခုခြိနျထိ သွင်ျကနျတိုငျး မပါမဖွဈတဲ့သီခငျြးတှခေညျြးပဲဆိုတော့ Stella နဲ့တူတူသွင်ျကနျသီခငျြးတှကေို နားထောငျကွညျ့ရအောငျ …
တေးသံရှငျဇျောပိုငျပွနျလညျသီဆိုထ “သွင်ျကနျမိုး” သီခငျြးက အခုထိလူတိုငျးပါးစပျဖြားမှာ စှဲနဆေဲပါ။ “မိုးပွေးလေးရေ သွင်ျကနျမိုးလေးရေ စိုရုံဖွနျးပကျဦး” ဆိုတဲ့စာသားတှကေ သွင်ျကနျနားနီးပွီဆိုတာနဲ့ ယောငျးတို့ခေါငျးထဲရောကျနပွေီ ဟုတျ ?
ဒီသီခငျြးစထှကျတုနျးကဆို (၁၀) နှဈသမီးပဲရှိသေးတယျ။ အဲ့အခြိနျတညျးက နားယဉျနခေဲ့တဲ့သီခငျြးက ခုထိလူကွိုကျမြားတုနျး။
Related article >>> သွင်ျကနျတှငျးလညျမယျ့ ယောငျးတို့ မဖွဈမနဆေောငျသှားသငျ့တဲ့ ပစ်စညျး (၅) မြိုး
ဒီသီခငျြးနဲ့ပဲ သွင်ျကနျမှာ ဆိုကွကကွနဲ့ သိပျကကျြသရရှေိတာပေါ့။ “မွနန်ဒာ ရညေိုညိုရဈခတျသနျးတော့ ရှမေနျးတောငျရိပျ တူတူခိုမယျပြိုဖွူတှရေယျ” ဆိုတဲ့သီခငျြးက မွနျမာ့ရိုးရာသွင်ျကနျကို အထငျဟပျဆုံးဆိုတာ ငွငျးလို့မရပါဘူး။
“ပိတောကျလကျဆောငျ”ကို ကွားမိတိုငျး ပိတောကျပနျးဝါဝါထိနျထိနျတှကေို ပွေးမွငျတာ ကိုယျတဈယောကျတညျးလားကှ။
Related article >>> သွင်ျကနျတှငျး အသားအရကေို ဘယျလိုထိနျးသိမျးကွမလဲ
“တဈနှဈတဈခေါကျတော့ရောကျလာမယျ မိနျးမခြောလေးရေ” ဆိုတာနဲ့ တဈကိုယျလုံးသွင်ျကနျအငှအေ့သကျတှနေဲ့ နှေးရပါတယျ။
“သွင်ျကနျနှဦေးတူးပို့တူးပို့” ဆိုတာနဲ့ နောကျကနလေိုကျဆိုနမေိပွီဆိုတာ ရဲရဲကွီးအာမခံတယျ။
Related article >>> နှဈသဈကူးသွင်ျကနျမှာ အပီပြျောနိုငျဖို့ ရှောငျရှားသငျ့တဲ့အခကျြမြား
နှဈတှပွေောငျးလညျး မဟောငျးတဲ့သီခငျြးဆိုရငျ ဒီသီခငျြးကိုပဲ လကျညှိုးထိုးပွရမယျထငျတယျ။ လိပျစာပြောကျတဲ့ရှာပုံတျောမငျးသားကွီးကိုလညျး သနားရတာအမော …
“ဟေ့ ဟေ့ နှမေ နှမေရဲ့ကပုံလေးက ခဈြစရာကှယျ” ဆိုတာနဲ့ ကိုယျထဲက အကွောပေါငျးတဈထောငျလောကျက ငွိမျငွိမျမနတေော့ဘူးဆိုရငျ သခြောပါပွီ ယောငျးက သွင်ျကနျပိုးတဈယောကျပါပဲ။
ဒီသီခငျြးတှကေ သွင်ျကနျရဲ့သင်ျကတေတှေ ဖွဈတယျ။ ဒီသီခငျြးတှကွေားလိုကျတာနဲ့ ဪ သွင်ျကနျတောငျနီးပွီပဲလို့ အမှတျရတယျ။ သွင်ျကနျပိုးရှိတဲ့သူမြားဆိုရငျဖွငျ့ ဘယျအသကျအရှယျရောကျရောကျ ဒီသီခငျြးတှကွေားတာနဲ့ မရိုးမရှတှကေို ဖွဈကုနျတော့တာပဲ။ ကဲ … For Her Myanmar ရဲ့ ယောငျးတှထေဲမှာကော သွင်ျကနျပိုးဘယျနှယောကျလောကျရှိလဲ ?
Tags: atar, Music, myanmar new year, playlist, songs, Thingyan